Malunga nathi-Iqela leZishan
Iqela laseZishan lasekwa ngo-Matshi 1984 kwaye libekwe kwisiXeko saseZhangzhou, esaziwa njenge- "IsiXeko sokuTya saseTshayina" kunye "neKomkhulu laseTshayina lokutya okuTyiweyo" kunye "neKomkhulu lamaShayina laseShayina" emazantsi e-China. Emva kweminyaka engama-34 yophuhliso oluqengqelekayo, ngoku sele igqityiwe.Umatshini wokutya odibanisa ukwakhiwa kwesiseko, imveliso, ukwenziwa kunye nentengiso zinokuqhubekeka phantse iitoni ezingama-200,000 zeemveliso ezahlukeneyo zezolimo kunye necala elisecaleni ngonyaka. Lishishini lesizwe eliphambili elikhokelayo kwimizi-mveliso yezolimo, ishishini eliphezulu leshumi kwishishini lokunkonkxa eTshayina, kunye neshishini eliqhubekayo kwishishini lokutya lesizwe. Iminyaka emininzi, ibisoloko ivavanywa "njengomhlawuli werhafu omkhulu" nguRhulumente weSixeko saseZhangzhou.
UZishan ujolise kwimveliso yokutya kunye nokuthumela kwelinye ilizwe. Iimveliso zayo zibandakanya ukutya okunkonkxiweyo, ukhuko, ikheri, amanzi amaminerali, iimveliso zasemanzini ezibandayo, iziqhamo kunye nemixube yemifuno, ukutyala umzi-mveliso wamakhowa kunye nezinye iindidi eziphambili, ikakhulu zithunyelwa eYurophu, eMelika, eJapan, kuMazantsi mpuma eAsia, eRashiya nakwamanye amazwe angama-60 Imimandla, ikhowudi yokuthumela ngaphandle "i-Q51" yaziwa kwilizwe jikelele, ngakumbi eJapan, eJamani nakwamanye amazwe aneemfuno ezingqongqo kumgangatho wokutya. Ukuqwalaselwa kweemarike kuphezulu kakhulu. Ukutya okunkonkxiweyo iZishan phesheya kumela umfanekiso wokutya okusemathinini eTshayina.
Iqela laseZishan linamathela kwimishini "yokubonelela ngokutya okukhuselekileyo, okusempilweni nokuqinisekisiweyo kuluntu"; egcina inkcubeko yenkcubeko yokuthengisa "evumela abathengi ukuba bathenge iimveliso zeZishan zilingana nokuthenga uxolo lwengqondo, ukutya iimveliso zeZishan kulingana ukutya ukutya okusempilweni", kwaye ihlala ibeka ukubaluleka komgangatho wokutya kunye nolawulo lokhuseleko, idlulile i-ISO9002, i-HACCP, "Hala", " I-Kosher ", isiqinisekiso se-US FDA, i-BRC yaseYurophu (uMgangatho weTekhnoloji yoKutya weLizwe) kunye ne-IFS (iMigangatho yokutya yaMazwe ngaMazwe). Iqela laseZishan likhokele kwaye lathatha inxaxheba ekwenziweni nasekuhlaziyweni kwemigangatho yesithandathu okanye yeshishini, kubandakanya "i-Asparagus enkonkxiweyo", "iShellfish ekheniweyo" kunye "neNtlanzi eyakhiwe." Iqela linamalungelo awodwa omenzi wechiza ali-12 avumelekileyo, kubandakanya ne-1 yokuvelisa ipatent, kwaye inqanaba lokuguqulwa kwempumelelo yenzululwazi kunye netekhnoloji ifikelela kuma-85%.
KwiNkomfa ye-XICAMX ye-Xiamen ka-2017, "Intaba ePurple ye-Coriander Heart" kunye "ne-Purple Mountain Yellow Peach Food Canned" zikhethwe njengezidlo ze-BRIC, kunye "neeMveliso zeNtaba ePurple, uMgangatho we-BRIC" iZishan Foods, ezithunyelwa ngaphandle kwintengiso yamanye amazwe, yamkelwe sisiganeko samanye amazwe. Imveliso yenkampani kunye nokuthengiswa kwamakhowa asemathinini, i-asparagus, kunye nenqanaba le-lychee phakathi kwelona shishini liphezulu kweli lizwe. I-Zishan Tomato Juice ibalwe njenge "Imveliso yase China eQinisekisiweyo yokuTya okuTyiweyo", kwaye uZishan "Bulaoquan" uye waba sisiselo esityunjiweyo seXiamen Airlines.
Kwiminyaka yakutshanje, iQela laseZishan landise ngamandla umxokelelwane wemizi-mveliso, otyale imali kulwakhiwo lweZishan Edible Fungus Silicon Valley Industrial Park, kwaye uzibophelele ekwakheni elona qela likhulu nelona liphezulu kwezobuchwephesha kwezamashishini okutya. Kwangelo xesha, inkampani yasebenzisa iJografi eselunxwemeni kunye nokuqinisekiswa kokuthengisa ukutya kwaselwandle kumazwe e-EU (zintathu kuphela eZhangzhou), yongeza imigca emi-2 yemveliso yentlanzi, ebandakanyeka kuphuhliso kunye nokusetyenziswa ngokubanzi kweentlanzi ezisemgangathweni ezisemgangathweni, iprojekthi yeyokuqala kwiPhondo leFujian, kwaye itekhnoloji ifikelela kwiphondo. Inqanaba eliphambili kunye nenzuzo ebalulekileyo kukhuphiswano.
Amashishini aphambili kuZwelonke aPhambili kuShishino lwezoLimo ngabaphathiswa besizwe abasibhozo
Iprojekthi yeSizwe yoBoniso lweeMveliso zezoLimo iProjekhthi yoCubungulo oluNzulu yiKhomishini yoPhuculo yeSizwe kunye noHlaziyo
Amashishini aphambili kaZwelonke eZinto eziNgxamisekileyo, nguMphathiswa Wezorhwebo
Eyokuqala neyesixhenxe iSivumelwano seLizwe sokuHlala kunye neShishini elithembekileyo, nguShishino lweSizwe noLawulo lwezoRhwebo
Ishishini laseTshayina eliPhezulu leShumi eliLishumi (ukuthumela ngaphandle)
I-AA yoShishino lweKhredithi yeBakala nge-CIQ
Amashishini alishumi aphezulu kwiNtlanganiso yoNyaka yoKhuseleko loKutya eTshayina, nguMququzeleli weNtlanganiso
Indawo yeShishini eliPhambili eliPhambili kuShishino lwezoLimo, iMedali yeGolide yePhondo laseFujian kwiShishini loPhawu lwezoLimo, elonaShishini liGqwesileyo lokuthenga ngetyala kwiPhondo laseFujian, nguRhulumente wePhondo waseFujian